Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kopicův statek
Kopicův statek (yaimbova Jirošova rychta) inzvimbo yakagadziriswa kubva kumagumo e18. zana remakore, chimiro chechimiro. Iko (pamwechete pamwe neDlask's estate) imwe yemuenzaniso unofadza zvikuru wemapuranga evanhu vePojizerský type. Purazi (Kacanovy no. 64) inongova yega ye1 km kumabvazuva kwemusha weKacanovy muTerov, mudunhu reSemily. Kune chifananidzo cheSt. George uye gorge ine akawanda sandstone reliefs yakagadzirwa nemuridzi Vojtěch Kopic.
Imba yazvino yakavakwa muna 1787 navarombo Jiří Jiroš, asi nheyo dzingave dzakakwegura. Imba yacho ine imba inogara-mbiri-imba ine imba yekutandarira, perpendicularly yakavakwa matanga ane matanga uye yakatarisana nepasi-pasi epurazi zvivakwa. Yadhi yakavharwa negedhi remabwe. Dura rematanda rakamira padyo.
Iyo purazi yakanga iri yemhuri yekwaJiroš, František Jiroš (1824–1902) aive meya wekutanga weKacanovy kubvira 1849.
Muna 1884 František Ji…